भान्साको नल तान्ने हालको सात वा धेरै बर्षहरुमा घरेलु बजार मा लोकप्रिय छ। यो अधिक लचिलो छ र परम्परागत नल को तुलना मा एक व्यापक दायरा कभर गर्दछ। नाम को रूप मा सुझाव दिईन्छ, भान्सा को नल को भान्छा मा सिंक मिलान को लागी प्रयोग गरीन्छ। भान्साको नल को रंग परिवर्तन नजिक बाट सम्बन्धित छ ...
भित्ता नल पर्खाल मा पानी आपूर्ति पाइप गाड्न छ, र पर्खाल को नल को माध्यम बाट वाश बेसिन वा तल सिंक गर्न को लागी सीधा। नल स्वतन्त्र छ, र washbasin / सिंक पनि स्वतन्त्र छ। Washbasin वा सिंक fau संग आन्तरिक संयोजन मा विचार गर्न को लागी आवश्यक छैन।
धेरै परिवारहरु एम्बेडेड फोहोर डिब्बा को उपयोग गर्न को लागी प्रयोग गरीरहेका छैनन् र क्याबिनेट मा फोहोर स्वादिष्ट स्वाद लाग्छ। तर के भान्छामा फोहोरको दुर्गन्ध आउँछ? वा यो खण्डन एक हप्ता को लागी फोहोर बाहिर नलगाउने मा आधारित छ? यसबाहेक, त्यहाँ सामान्यतया क्याबिनेट मा कभर छन्। समयमै सफाई ...
भान्सा कैबिनेट को हार्डवेयर
भान्सा कैबिनेट हार्डवेयर आधारभूत हार्डवेयर र कार्यात्मक हार्डवेयर मा विभाजित छ। पूर्व काज समूह र स्लाइड रेल को सामान्य नाम हो, र पछिल्लो सीधा प्रयोग गरिएको हार्डवेयर जस्तै पुल टोकरी भण्डारण रैक को सामान्य नाम हो। भान्सा आधारभूत हार्डवेयर आधारभूत हार्डवेयर सामान्यतया सामेल छन्: ज ...
चमकदार गिलास बेसिन
परम्परागत सिरेमिक धुने बेसिन संग तुलना, धुने बेसिन को यो प्रकार को मात्र एक क्रिस्टल स्पष्ट उपस्थिति र उज्यालो रंग छ, तर यो पनि पारदर्शी, क्रिस्टल स्पष्ट र घने गिलास सामग्री छ, जो ब्याक्टेरिया को पोषण गर्न सजिलो छैन र सुविधाजनक सफाई को लाभ छ । त्यसैले, यो ...
कसरी आयोनिक शावर बार छान्नुहोस्
नकारात्मक आयन स्नान टाउको विदेश मा धेरै लोकप्रिय छन्। के तपाइँ जान्नुहुन्छ नकारात्मक आयन स्नान टाउको के हो? नकारात्मक आयन स्नान टाउको को अद्वितीय कार्य के हो? मलाई आज तपाइँलाई यो परिचय दिनुहोस्। नकारात्मक आयन स्नान पानी इनलेट ह्यान्डल मा Maifan ढु ,्गा, टूमलाइन र नकारात्मक आयन कणहरु लाई जोड्नु हो ...
तपाइँ स्टेनलेस स्टील शावर किन मनपर्छ?
स्टेनलेस स्टील स्नान हाम्रो दैनिक जीवन मा सबै भन्दा धेरै प्रयोग हुने वर्षा मध्ये एक हो। किनभने स्टेनलेस स्टील धेरै विशेषताहरु छन्, धेरै परिवारहरु स्टेनलेस स्टील स्नान को उपयोग गर्न को लागी इच्छुक छन्। यसको अतिरिक्त, स्टेनलेस स्टील स्नान को लाभ के हो? स्टेनलेस को लाभहरु को व्याख्या गरौं ...
काउन्टरटप को प्रत्येक प्रकार को प्रकृति
यदि तपाइँ एक लामो समय को लागी क्याबिनेट को उपयोग गर्न चाहानुहुन्छ, countertop धेरै महत्त्वपूर्ण छ! एक ठोस, टिकाऊ र सुन्दर क्याबिनेट तालिका हामीलाई खाना पकाउँदा कम नराम्रो महसुस गराउनेछ। तर धेरै साथीहरु लाई क्याबिनेट काउन्टरटप को बारे मा धेरै थाहा छैन, र अक्सर थाहा छैन कसरी छनौट गर्न को लागी। आज, आउनुहोस् ...
क्याबिनेट ढोका को वर्गीकरण
क्याबिनेट ढोका सामग्री द्वारा वर्गीकृत छन्: डबल सजावटी प्यानल, मोल्ड प्लेट, रंग बेकिंग प्लेट, क्रिस्टल स्टील ढोका, एक्रिलिक प्लेट र ठोस काठ प्लेट। डबल सजावटी प्यानल, त्यो हो, melamine बोर्ड, सब्सट्रेट सामान्यतया कण बोर्ड हो, र सतह melamine लिबास हो। लाभ: टी ...
हामी किन Sintered ढु्गा मनपर्छ?
Sintered ढु of्गा को मुख्य घटक प्राकृतिक ढु powder्गा पाउडर र माटो हो। सार मा, यो sintered घने ढु्गा हो। यो १००००० टन प्रेस प्रणाली द्वारा १२०० above माथि एक उच्च तापमान मा निकालिएको छ। Sintered ढु्गा को लाभ के हो? Resistance प्रतिरोध र जंग प्रतिरोध लगाउनुहोस् Mohs कठोरता ओ ...
विभिन्न कैबिनेट काउन्टरटप को तुलना
अन्य मानिसहरु countertops उज्ज्वल र दस बर्ष को लागी नयाँ को रूप मा सफा गरीएको छ। चाहे उनीहरु वायुमण्डलीय र सरल हल्का रंग countertops वा शान्त र सुरुचिपूर्ण गाढा रंग countertops हो, चाहे उनीहरु फोहोर प्रतिरोधी हो फोकस रंग होइन, तर सामाग्री हो। 2012 देखि 2019 सम्म, धेरै मानिसहरु ...
अवरुद्ध र मोल्थी Kithen कैबिनेट मा
भान्साको ढल अवरुद्ध र ड्रेज गरिएको छ। भान्सा सिंक को ढल पाइप अवरुद्ध छ, जो एक साधारण समस्या हो। पाइप अवरोध पछि, यो तुरुन्तै ड्रेज्ड हुनुपर्छ, अन्यथा यो ढल ओभरफ्लो कारण हुनेछ। ढल पाइप अवरुद्ध छ। सामान्यतया, कोहनी अवरुद्ध छ, त्यो हो, पी ...